Pterostilbene Faa'iidooyinka budada sida Nootropics iyo supplements anti-gabowga ah ee Shangke Chemical
Pterostilbene Faa'iidooyinka budada sida Nootropics iyo supplements anti-gabowga
1. Waa maxay Pterostilbene?
Pterostilbene waa kiimikal muhiim ah oo si dabiici ah loo soo saaray inta lagu jiro nolosha qaar ka mid ah dhirta si loogula dagaallamo caabuqa. Xaruntani waxay la mid tahay xarun kale oo loo yaqaan 'resveratrol' oo si dhaqsi ah ayaa looga heli karaa foomka dheeriga ah. Daawooyinka 'Pterostilbene' ayaa si aad ah bioav laga heli karaa. Tani waxay ka dhigan tahay in si fudud oo dhakhso leh looga nuugo jidhka oo aan lagu liitaa habka dheefshiidka. Budada Pterostilbene sidoo kale waa mid wax ku ool ah, weli nolosheeda nuskeed aad bay u gaaban tahay maadaama ay ka hooseyso 100 daqiiqo.
Meelaha cuntada ee Pterostilbene
Pterostilbene ilaha cuntada waxaa ka mid ah miro guduud, yicib, digir ah, geedo digir ah, laws, casaan cas, canab cas, caleemo canab, geedka geedka kino Indian, Sandalwood cas, iyo kookaha. Beero guduudku waa, si kastaba ha ahaatee, isha ugu sareysa ee cuntada Pterostilbene, laakiin qadarka oranjiga leh waxay wali yartahay marka loo barbar dhigo Pterostilbene. Waxyaabaha buluuga ah ee 'Pterostilbene' waxaa la rumeysan yahay inay ku dhawaad ​​99 illaa 52 nanograam ah, halkii garaam kasta oo canab ah.
Qaabka waxqabadka Pterostilbene wuu ka duwanyahay kan resveratrol. Xarunta Pterostilbene waa tan ugu awooda badan. Faa'iidooyinka kala duwan ee budada Pterostilbene waxay u dhigantaa hab kale oo ficil sidoo kale. Tallaabada daawada loo yaqaan 'trans-pterostilbene' waxaa ka mid ah antineoplastic, antioxidant, iyo anti-bararka.
Pterostilbene wuxuu muujiyaa waxqabadyo firfircoon oo antifungal ah oo toban jeer ka awood badan resveratrol. Xarunta Pterostilbene sidoo kale waxay muujineysaa saameynta fayraska. Kahortagga dhirta ee dhowr cudur ayaa u muuqda inay tahay farsamo muhiim ah oo loo yaqaan 'stilbenes', oo ay ka mid tahay Pterostilbene, waxqabadyadani waxay sidoo kale gaarayaan xayawaanka iyo bini'aadamka.
Pterostilbene sidoo kale waxay muujineysaa saameynta xinjirowga lidka ku ah dhowr aalado moodeel. Daraasad cilmi baaris ayaa muujineysa falalka Pterostilbene waxaana ka mid ah hiddo-wadaha xakameeya burooyinka, isbeddelada dariiqyada wareejinta calaamadaha, oncogenes, hidda-wadayaasha unugyada, iyo hidda-wadaha nidaamka xakameynta unugyada.
Guryaha loo yaqaan 'antioxidative-ka' ee Pterostilbene aad ayey uga duwan yihiin tan resveratrol-ka. Resveratrol, seddexda koox hydroxyl waxay ka takhalusaan ROS (noocyada falcelinta oksijiinta) ee unugyada go'doonsan iyo dhiigga oo dhan halka Pterostilbene, oo leh 1 hydroxyl group iyo 2 methoxy group ayaa yareeya ROS extracellular. Astaamaynta astaamaha antioxidation-ka ayaa awood u siineysa isticmaalka budada Pterostilbene in lagu bar-tilmaameedsado noocyada ogsijiinta firfircoon ee extracellular, kaasoo sababa dhaawaca unugyada inta lagu jiro caabuqa dabadheeraada.
Hoos waxaa ku yaal farsamooyin badan oo pterostilbene ah oo ficil looga wada hadlayo si faahfaahsan;
Farsamooyinka Pterostilbene; Firfircoonaanta Sirtuin
Pterostilbene waxay kicineysaa waddo calaamad u ah SIRT1 oo ah unugyada bixiya difaaca kahortaga waxyeelada unugyada, sidaasna ay kujirto. Wadadani waxay kor u qaadeysaa muujinta p53. P53 waa borotiin ka difaacaya DNA-ga waxyeelada wuxuuna ka ilaaliyaa unugyada isbedelada sababa kansarka.
SIRT1 wuxuu kaa hor istaagi karaa dhaawaca iyo xumaanshaha unugyada, kaasoo sii kordha marka aad sii gabowdaba.
Saamaynta Ka hortagga Caabuqa
Daraasado dhowr ah ayaa muujiyay in xarunta kiimikada ee pterostilbene ay hoos u dhigeyso caabuqa oo loo habeeyo TNF-alpha (buro necrosis factor-alpha). Walwalka Oxidative wuxuu keenaa barar; Pterostilbene waxay xakameyneysaa interleukin-1b iyo TNF-alpha iyagoo yareynaya noocyada oksijiinta ee firfircoon.
Xaruntani waxay sidoo kale ka hortageysaa walbahaarka qayb ka mid ah mashiinada mobilada ee loo yaqaan ER (endoplasmic reticulum). Daraasad cilmi baaris, markii dahaarka unugyada xididdada dhiigga ay u if baxeen budada Pterostilbene, dahaarkooda kama jawaabin calaamadaha caabuqa, umana muuqan inay yihiin kuwa shidan.
Farsamooyinka Pterostilbene; Saameynta Kahortaga Kansarka
Waxaa si la yaab leh, in kasta oo ay yaraynayso ER (endoplasmic reticulum) walwalka ku jira dahaarka xididdada dhiigga, Pterostilbene wuxuu sare u qaadaa walaaca fekerka endoplasmic reticulum unugyada kansarka hunguriga. Waxay, sidaas darteed, waxay si wada jir ah u dhaawaceysaa unugyada kansarka waxayna ka hortagtaa walaaca kaabayaasha ee unugyada caafimaadka qaba.
Unugyada maskaxda ama unugyada maskaxda (glioma) unugyada kansarka, Pterostilbene waxay hoos u dhigeysaa Bcl-2 waxayna sare u qaadeysaa Bax; Isbadaladaani waxay kor u qaadaan calaamadaha unugyada "isdilka" ee sababa laf dhabarta ama unugyada maskaxda inay dhintaan.
Unugyada kansarku waxay u isticmaalaan dariiqa loo yaqaan 'Notch-1', si looga hor tago naftooda ficillada daawooyinka kemotherapy, oo ay ku jiraan oxaliplatin iyo fluorouracil. Pterostilbene waxay xannibayaan astaamaha 'Notch-1' oo tilmaamaya in burooyinka ay u nugul yihiin daaweynta iyada oo loo marayo kemotherapy.
Pterostilbene waxay hoos u dhigeysaa soo saarida dhowr xeryo oo kor u qaada kansarka sambabka, oo ay ku jiraan MUC1, b-catenin, Sox2, NF-κB, iyo CD133. Saameyntan isku-darka ah waxay yareysaa bararka waxayna ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn koritaanka unugyada kansarka.
Pterostilbene ayaa awood u leh inuu bartilmaameedsado gobolka hippocampus ee maskaxda ka xushay. Halkan, waxay kor u qaadeysaa CREB (borotiinka 'jawaab celinta borotiinka' CAMP element elementinging protein '), BDNF (qodobka maskaxda ka soo saare neurotrophic), iyo MAPK (borotiinka borotiinka ku shaqeeya mitogen).
Saddexda borotiinno waxay ka caawiyaan neurons-yada isu-dhufashada, kobcinta, iyo wax-ku-oolnimada deegaankooda. Ka hortagga murugada ee SNRI ayaa waliba beegsanaya dariiqooyinkan.
Pterostilbene sidoo kale waxay kor u qaadee borotiinka loo yaqaan Nrf2 ee hippocampus, taas oo iyaduna kor u qaadeysa muujinta borotiinka antioxidant-ka.
Pterostilbene wuxuu jirka ka hortagaa cudurka Alzheimers iyadoo maskaxda siineysa kahortaga beta-amyloid (Aβ). Waxay tan ku sameyneysaa iyada oo ay ku lug leedahay Akt iyo PI3K, laba borotiin oo taageera koritaanka neuron, xusuusta, iyo barashada.
3. Faa'iidooyinka budada Pterostilbene
Hoos waxaa looga wada hadlay saddexda ugu muhiimsan budada pterostilbene faa'iidooyinka;
i. Pterostilbene sida nootropics
Markii aan sii gabowdaba, qaababka cusub ee fikirka waxay noqdaan kuwa dhib badan sidii loo qaabayn lahaa, oo xusuusta ayaa sii adkaata helitaanka. Awoodda la'aanta in la fuliyo howlaha garashada ee caadiga ah ayaa sidoo kale hoos u dhacaya. Kaabista Pterostilbene ayaa kaa caawin karta abuurista jawiga neerfa ee cusboonaysiinta da 'kastoo da' ah.
Pterostilbene waa nootropic awood leh, kaas oo ka caawiya maskaxda maskaxda iyo xoojinta garashada. Waxaa sidoo kale loo qaataa si isdaba joog ah inta lagu gudajiro hawlagallada ka hor sababtoo ah awoodda ay u leedahay kaalmaynta vasodilation ee xididdada dhiigga. Waxay, sidaas darteed, waxay bixisaa saameyn la mid ah tan kale ee nitric oxide walxaha kobcinta.
Faa'iidooyinka nootropic ee Pterostilbene ayaa la rumeysan yahay inay ka dhalatay awooddeeda kor loogu qaado heerarka dopamine. Jiirka, Pterostilbene waxay hoos u dhigtay walaaca waxayna xoojisay niyadda. Daraasad la sameeyay oo ku lug leh jiirka da 'ahaan, kaabisyada pterostilbene ayaa sare u qaaday heerarka dopamine-ka iyo garashada oo la xoojiyay. Sidoo kale, markii Pterostilbene loo diyaariyay maskaxda maskaxda hippocampus, xusuusta shaqadooda ayaa la xoojiyay.
Daraasad kale oo ku lug leh jiirka, Pterostilbene ayaa sidoo kale kor u qaaday koritaanka unugyada cusub ee hippocampus. Sidoo kale, unugyada asliga ah ee laga soo saaray maskaxda maskaxda jiirka yar ayaa si dhakhso leh u koray markii ay ku dhacday Pterostilbene.
Marka loo eego daraasadaha unugyada, budada pterostilbene waxay horjoogsataa MAO-B (monoamine oxidase B) waxayna kor u qaaddaa dopamine-ka maskaxda ku jira. Ficilkani wuxuu la mid yahay dawooyinka daweynta cudurka Parkinson, sida rasagiline, safinamide, iyo selegiline. Daraasad baaris, Pterostilbene sidoo kale waxay ka ilaalisaa neerfayaasha waxyeelada la xidhiidha AD (cudurka Alzheimers).
Awoodda xakamaynta walaaca ee 'Pterostilbene' ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay ka dhalatay awooddeeda xannibidda monokamase oxidase B. Daraasad gaar ah, Pterostilbene waxay muujisay waxqabad xasaasiyad ah laba iyo hal mg / kg qiyaasood. Hawshan anxiolytic ee xarunta waxay la mid tahay tii diazepam hal iyo laba mg / kg ee EPM.
ii. Pterostilbene iyo cayilka
Daraasad ayaa baareysa awooda Pterostilbene si loo maareeyo buurnaanta waxay muujisay inuu jiro xiriir weyn oo ka dhexeeya dheefta pterostilbene iyo maareynta miisaanka. Saynisyahannadu waxay rumeysan yihiin in budada Pterostilbene ay leedahay awooda ay ku saameyn karto heerarka dufanka badan sababtuna ay tahay yareynta lipogenesis. Lipogenesis waa habka loo sameeyo unugyada dufanka badan. Pterostilbene sidoo kale waxay kordhisaa gubashada dufanka badan ama dufanka dufanka ee beerka.
Daraasad la sameeyay oo ku saabsan dadka da'da dhexe ee leh kolestaroolka sare, koox kaqeybgaleyaal ah oo aan qaadan daawooyinka kolestaroolka ayaa lumiyay xoogaa miisaan ah markii ay qaadanayeen kaabayaasha pterostilbene. Natiijooyinkaani waxay la yaab ku noqdeen cilmi-baarayaashan maxaa yeelay cilmi baaristaan ​​looguma talagalin in lagu cabbiro dheellitirka pterostilbene sidii miisaanka oo yaraada.
Daraasadaha xayawaannada iyo unugyada ayaa sidoo kale muujinaya in xarunta pterostilbene laga yaabo inay gacan ka gaysato kor u qaadida dareenka insulin. Waxa Pterostilbene qabato ayaa ah inay xannibto howsha loogu beddelo sonkorta dufanka. Waxay sidoo kale ka horjoogsataa unugyada baruurta in ay koraan oo tarmaan.
Pterostilbene waxay sidoo kale beddeshaa qaabka mindhicirka mindhicirka xiidmaha waxayna ka caawisaa dheefshiidka cuntada.
Suntuugyada lagu quudin jiray Pterostilbene waxay lahaan jireen buro caafimaad leh oo caafimaad leh waxayna sare u kaceen Akkermansia muciniphila. A. muciniphila waa nooc bakteeriya ah oo u muuqda inuu ka hortago cudurka heerka hooseeya, buurnida, iyo kaadi macaanka. Bakteeriyadaasi waxay noqotay diirada weyn ee cilmi baarista probiotic dhawaan.
iii. Pterostilbene wuxuu dardar galiyaa cimrigiisa
Faa'iidooyinka da'da gabowga 'Pterostilbene' waxay ku xiran tahay kiimikooyin kiimikaad oo loo yaqaan 'Trans-pterostilbene'. Kiimikadan ayaa la cadeeyay inay yareyso bararka, hoos u dhaca garashada, iyo xasilinta sonkorta dhiiga. Daraasadaha vivo iyo cilmiga 'vitro' waxay taageeraan ka hortagga iyo saameynta daaweynta Pterostilbene. Kiimikadan ayaa sidoo kale u shaqeysa sidii xakamaynta xakameynta kalori, taasoo kicineysa jirka inuu sii daayo biochemicals, oo ay ku jiraan adiponectin oo gaabinaysa geedi socodka gabowga inta lagu gudajiro bogsashada.
Dheeraadkan anti-gabowga ayaa sida caadiga ah caan ku ah kahortaga cudurada la xiriira da'da, sidaas darteedna kordhinta nolosha. Jiirka, qiyaasta hoose ee astaamaha kiimikada waxay hoos u dhigeen calaamadaha la xiriira da'da. Daraasadu waxay soo jeedisay in cunida ilaha badan ee pterostilbene sida cunnada buluuga ah ay dib u dhigi karaan caqabadaha caafimaad ee la xiriira da'da, oo ay kujiraan waallida iyo kansarka.
4. Pterostilbene iyo resveratrol
Shaki kuma jiro in Pterostilbene iyo resveratrol ay aad isugu dhowyihiin. Resveratrol waxaa si weyn loogu yaqaanaa kiimikada noolaha ee khamriga cas iyo canabka.
Faa'iidooyinka caafimaad ee resveratrol waxay la mid yihiin kuwa Pterostilbene waxaana ku jira kahortagga cudurka Alzheimer, saameynta xinjirowga lidka ku ah, xoojinta adkeysiga tamarta, saameynta ka hortagga caabuqa, ka hortagga sonkorowga, iyo faa'iidooyinka wadnaha.
Pterostilbene run ahaantii waxay kimikal ahaan lamid tahay resveratrol, laakiin daraasado ayaa horey usheegay in Pterostilbene laga yaabo inay ka awood badan tahay resveratrol maaraynta xaaladaha caafimaad qaarkood. Pterostilbene waxay soo bandhigtay karti dheeri ah xagga kor u qaadida shaqada garashada, caafimaadka wadnaha, iyo heerarka gulukooska.
Kala badh nolosha 'Pterostilbene' sidoo kale waa ka gaaban tahay nolosha nuska ah ee resveratrol. Pterostilbene run ahaantii waa afar jeer ka dhakhso badan si looga nuugo nidaamka dheef-shiidka jirka oo ka badan resveratrol. Fikrad ahaan, tani waxay ka dhigi kartaa Pterostilbene dhowr jeer oo waxtar badan dhowr jeer resveratrol. Si kastaba ha noqotee, daraasado dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo si loo xaqiijiyo tan.
Pterostilbene iyo resveratrol sidoo kale mararka qaarkood waa la isku daraa si ay u bixiyaan isugeyn isku dhafan oo ah qaab kaabsal ah. Isku-darka isku-darka ayaa la rumeysan yahay inuu awood badan leeyahay maadaama ay isku qasayso faa'iidooyinka labada xeryood.
5. Dheeraadka Pterostilbene
Shaki kuma jiro in si loo gaaro faa'iidooyinka aad loo jecel yahay ee Pterostilbene, waxaa lagugula talinayaa inaad u qaadatid sidii budo dheeri ah. Daawooyinka 'Pterostilbene' waxaa lagu suuq geeyay bakhaarro cuntooyin dabiici ah oo fara badan iyo dukaamada internetka ee ku takhasusay kaabista cuntada. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa soo-saareyaasha pterostilbene internetka.
Dheeraynta 'Pterostilbene' ayaa inta badan lagu heli karaa qaab kaabsal, oo leh qiyaaso badan oo kala duwan. Waa inaad si aad ah u akhrido qoraalka calaamadda ama sumadda oo aad ku qortaa xaddiga Pterostilbene ee kaabsal walba intaadan gadan. Tani waa muhiim maxaa yeelay qiyaaso kala duwan ayaa laga yaabaa inay muujiyaan saameyn kala duwan.
Sidoo kale, xoogaa kaabis ah pterostilbene ayaa laga yaabaa inay ka sarreeyaan waxa lagu sameeyay bini-aadamka. Qiyaasta ugu caansan ee la heli karo waxay udhaxeysa 50 mg iyo 1,000 mg kabasho kasta.
Sidii aan horayba u soo sheegnay, isku-darka kaabayaasha ayaa sidoo kale la heli karaa, iyada oo isku darka ugu caansan uu yahay Pterostilbene iyo resveratrol. Pterostilbene sidoo kale waxaa lagu daraa curcumin, shaah cagaaran, astragalus, iyo waxyaabo kale oo dabiici ah.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa kareemada qoraxda ee ka kooban Pterostilbene in kasta oo ay tani naadir tahay. Qaddarka Pterostilbene ee loo baahan yahay inuu si wax ku ool ah kaaga difaaco kansarka maqaarka lama baarin, laakiin waxay ku siin kartaa difaac dheeraad ah.
6. Xagee laga heli karaa budada Peterostilbene ugu tayada sareysa?
Haddii aad raadineyso budada pterostilbene tayo sare leh oo iib ah, ka dib waxaad ku sugan tahay meesha saxda ah. Waxaan nahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan, aqoon, iyo soo-saareyaasha pterostilbene soosaarka Shiinaha. Waxaan bixinaa badeecado saafi ah oo si wanaagsan loo diyaariyey oo had iyo jeer lagu tijaabiyo shaybaarka koox saddexaad heer caalami ah si loo hubiyo daahirnimo iyo nabadgelyo. Waxaan had iyo jeer amarrada ku bixinnaa Mareykanka, Yurub, Aasiya, iyo qaybaha kale ee adduunka. Sidaa darteed haddii aad rabto inaad iibsato budada pterostilbene ee tayada ugu sareysa ee suurogalka ah, kaliya nala soo xiriir hadda.
Rimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). “Resveratrol, pterostilbene, iyo piceatannol oo ku yaal berry vacinesum”. J Cunnooyinka Cuntada Beeraha ah. 52 (15): 4713–9.
Kapetanovic IM, Muzzio M., Huang Z., Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics, bioavailability afka, iyo muuqaalka dheef-shiid kiimikaadka resveratrol iyo analog-ga dusha sare, pterostilbene, ee jiirka. Hooyo. Farmasiis. 2011; 68: 593-601.
Nabdoonaanta isku-dhafka 'transveratrol' oo ah cunno cusub oo loo yaqaan 'Regulation' (EC) No 258/97 ″. Joornaalka EFSA. Maamulka Badbaadada Cuntada Yurub, Gudiga EFSA ee Alaabada Cunto, Nafaqada iyo Xasaasiyada. 14 (1): 4368
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (2014). "MALDI mass spectrometry masawiro isku mar ah oo ah goobta resveratrol, pterostilbene iyo viniferins ee caleemaha canabka". Molecules. 2013 (7): 10587–600.
1.Waa maxay Pterostilbene?
2.Pterostilbene farsamooyinka ficil
3.Pterostilbene dheefaha budada
4.Pterostilbene iyo resveratrol
5.Pterostilbene dheeri ah
6. Xagee laga helaa budada Peterostilbene ugu tayada sareysa?